Welcome to Aayaha Nolosha » WIIL SOOMAALIYEED OO KAALINTA KOOWAAD KA GALAY TARTAN QUR’AAN OO LAGU QABTAY DALKA IMAARAADKA
WIIL SOOMAALIYEED OO KAALINTA KOOWAAD KA GALAY TARTAN QUR’AAN OO LAGU QABTAY DALKA IMAARAADKA
June 8, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Magaaladda Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta waxaa lagu soo gabo gabeeyay tartanka Quraan akhriska , waxaana tartankan oo ahaa mid caalami ah ka qeyb galay in ka badan 100-tartame oo ka kala socday wadamo kala duwan oo caalamka ka mid ah.
Axmed Burhaan Maxamed oo ah 16-sano jir Soomaali Mareykan ah ayaa tartankan ka galay kaalinta koobaad, waxa uuna Wiilkan Soomaaliyeed tartanka quraan akhriska ku matalayay Muslimiinta dalka Mareykanka.
Wiilkan Soomaali Mareykanka ah ayaa noqday qofkii ugu horeeyay oo Mareykanka matalaya oo ku guuleysta tartankan oo soo tixnaa mudo 22-sano ah, wiilkan ayaana quraanka ku bartay Masjidka Abuubakar Sadiiq oo ku yaala magaaladda Minneapolis.
Axmed Burhaan Maxamed ayaa sheegay in aad ugu faraxsan yahay in uu kaalinta koowaad ku guuleesto tartankan caalamiga ah, waxa uuna u mahad celiyay Waalidiintiisa iyo macalimiintii quraanka soo baray.
“Waa dareen weyn iyo Natiijo aan la rumeysan Karin guushayda isbuucan, marna kuma fekerin inaan guuleysan doono, waayo Tartanku waxa uu ahaa mid adag, laakiin, waxaan aad uga mahad celinayaa Ilaahay, Waxaa si gaar ah u macaan inaad ogaatid inaan aniga ahay qofkii ugu horreeyey oo Maraykan ah ee ku guuleysta halkan”.Ayuu yiri Axmed.
Wiilkan Soomaali Mareykanka ee kaalinta koowaad ka galay Tartanka Quraan akhriska ee lagu qabtay magaalada Dubai ayaa ku guuleestay lacag dhan 250,000 Dirham oo ah lacag ka badan 60-kun oo Dollar.